key ကိုလေ့လာဆန်းစစ် | တစ်ဦးက Forex ကုန်သွယ်မှုစနစ်စိတ်ကို
ပွဲစား Forex ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
category: မော်ကွန်း: key ကိုလေ့လာဆန်းစစ်
သိနားလည်နိုင်ဖို့ TRADE ကို BALANCE
ganifx/ နိုဝင်ဘာလ 7, 2017/ key ကိုလေ့လာဆန်းစစ်/0မှတ်ချက်များ
ယေဘုယျအားဖြင့်ကုန်သွယ်ရေး Balance / ကုန်သွယ်ရေးချိန်ခွင်လျှာ (bOT) တိုင်းပြည်တစ်ပြည်သို့တင်သွင်းတစ်ဦးစုစုပေါင်းထုတ်ကုန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်အတူတိုင်းပြည်တစ်ပြည်ကနေပို့ကုန်ထုတ်ကုန်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုစုစုပေါင်းအရေအတွက်ကများအကြားခြားနားချက်ခြားနားချက်. စာအရေးအသား၏လွယ်ကူခြင်းအဘို့အ, ထို့နောက်ယခု မှစ. ကျွန်တော် bot တွေဟာကုန်သွယ်ရေးငွေလက်ကျန်အဖြစ်ရည်ညွှန်း. bot ငွေပေးချေမှုရမည့်သို့မဟုတ်လက်ရှိအကောင့်များ၏ Balance ၏ပြင်ဆင်မှုတွင်အကြီးဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်, အရေအတွက်ကရာဖြစ်ပါသည်…
အခြေခံဒုတိယအစိုးရကထံမှတာဝန်ရှိသူတဦးကအချက်အလက်များ၏ကြေငြာချက်ဖြစ်ပါတယ်. ဒီ data ဂဏန်းဖြစ်ပါတယ် – ဤအဒေတာဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအတွက်ငွေကြေးမဝယ်သို့မဟုတ်ရောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုယူစျေးကွက်သင်တန်းသားများကိုအသုံးပြုသောထားတဲ့အတွက်အချိန်မဆိုတိကျတဲ့အချိန်ကာလဖြန့်ချိကိန်းဂဏန်းများ. ကျနော်တို့အများကြီးစီးပွားရေးက်ဘ်ဆိုက်များအတွက်စီးပွားရေးဒေတာလွှတ်ပေးရန်အချိန်ဇယားကိုတွေ့နိုင်ပါသည်. သူတို့ထဲမှတစ်ဦး forexfactory.com. ဤတွင်ကျနော်တို့ကဒေတာတွေကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်…
မြိုး – အခြေခံ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း
အခြေခံအားဖြင့်အခြေခံအုပ်စုနှစ်စုအတွက်ခွဲခြားနိုင်ပါသည် : 1. စီးပွားရေးမူဝါဒ၏သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများ၏မှတ်ချက်များသို့မဟုတ်ထင်မြင်ယူဆခြင်းမှရရှိလာတဲ့အခြေခံ. 2. စာရင်းအင်းဒေတာကနေရရှိလာတဲ့အခြေခံ. မှတ်ချက်များသို့မဟုတ်တာဝန်ရှိသူတဦးကကြေညာချက်သို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည်2အမှု : 1. မှတ်ချက်များမှတ်ချက်များအားလုံးကိုတိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေအပြုသဘောသို့မဟုတ်အကောင်းမြင်ဖြစ်ကြောင်း Hawkish bernadakan ကိုဆောက်. 2. မှတ်ချက်များ…
အတိုးနှုန်းနှင့် Forex ၏ဆက်စပ်မှု
ganifx/ အောက်တိုဘာလ 29, 2017/ key ကိုလေ့လာဆန်းစစ်/0မှတ်ချက်များ
ကျနော်တို့ကုန်သွယ်လှုပ်ရှားမှုကျင့်သောကြောင့်- ငွေကြေးကိုမဝယ်အတိုးနှုန်းနှင့်အတူလုပ်ဖို့တစ်ခုခုရှိခဲ့. သူတို့ကကမ္ဘာ့စီးပွားရေး၏စီးဆင်းမှုကိုအလျင်ဆုံးဖြတ်ရန်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငွေကြေးပေါ်တွင်မူတည်သည်နှင့်အတိုးနှုန်းပေါ်ရွှေ့ (ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမြို့တော်များ၏စီးဆင်းမှု) သို့နှင့်တိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှထွက်. အတိုးနှုန်းကိုလည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်အခြားစျေးကွက်ပါဝင်သူများ၏အာရုံကိုဆွဲဆောင်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်. သူတို့ကစီးပွားရေးလုပ်နေတာပိုမိုစိတ်ဝင်စား…
ဤရိုးရှင်းသောနားလည်ခြင်း, တစ်ဦးအတိုးနှုန်းသို့မဟုတ်အတိုးနှုန်းအဆင့်၏တန်ဖိုးသည် Forex ကမ်ဘာပျေါတှငျပိုက်ဆံ၏အလျင်စေသည်. တနည်းအားဖြင့်အသီးအသီးကုန်သွယ်ငွေကြေးအပေါ်အတိုးနှုန်းမှစျေးကွက်တုံ့ပြန်မှုကြောင့် Forex စျေးကွက်ရွှေ့. ငွေကြေးအပေါ်အတိုးနှုန်းအခြေခံစံနှုန်းစျေးနှုန်း၏တန်ဖိုးကိုဆုံးဖြတ်အတွက်အကြီးမားဆုံးအချက်များတစ်ခုဖြစ်သည်, ငွေကြေး၏တန်ဖိုးအပါအဝင်. သိရန်နှင့်အထဲကရှာတွေ့…
ganifx/ အောက်တိုဘာလ 16, 2017/ key ကိုလေ့လာဆန်းစစ်/0မှတ်ချက်များ
ယခင်ကနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့် ပတ်သက်. ဆွေးနွေးတင်ပြပြီးမှ, ဒါကြောင့်ဒီအချိန်ကျနော်တို့အခြေခံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဆြေးြေိံးလိမ့်မယ်. ကျွန်တော်တို့ရဲ့နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ tools များအတွက်ပုံမှန်အားဖြင့်အညွှန်းကိန်း၏ပုံစံနှင့်အခြား tools တွေနဲ့ဖြစ်စေသုံးလျှင်, သို့ဖြစ်လျှင်ဤအခြေခံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအတွက်များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဟာပိုပြီးမကြာခဏတိုင်းပြည်စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းမှစီးပွားရေးဒေတာလေ့လာတွေ့ရှိပါလိမ့်မယ်, နေ့စဉ်သတင်းဖြန့်ချိနိုင်ငံ၏ငွေကြေးစနစ်၏တက်နှင့်အကျနှင့်အတူအလွန်သြဇာရှိလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်…
Fibonacci retracement မွမ်းမံရန်ပုံ
မီးခုံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (11) Fibonacci နှင့်အတူခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (4) fibonacci ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (12) Forex ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (254) key ကိုလေ့လာဆန်းစစ် (14) နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (27) မီးခုံကိုသင်ယူ (22) fibonacci သင်ယူ (16) Forex သင်ယူ (86) ညွှန်ပြချက်သင်ယူ (5) မီးခုံ (3) Fibonacci ဆွဲရန်မည်သို့မည်ပုံ (6) ဇယားပုံစံ (14) ဇယားပုံစံများ (32) အခြေခံခုံ (6) အခြေခံ Forex' (6) နှစ်ဆထိပ် (4) Elliot လှိုင်း (9) fibonacci retracement (16) အခြေခံ Forex (166) Forex အရင်ကဆိုရင် (4) Forex နည်းဗျူဟာ (23) Forex နည်းဗျူဟာ (7) ရုပ်သံလိုင်းလိုင်း (7) ဦးခေါင်းနှင့်ပခုံး (6) Forex ညွှန်ပြချက် (15) ဦးရေပြားညွှန်ပြချက် (6) ဘားအတွင်းအပြင် (5) intermarket (6) ဆက်စပ်မှု (16) MACD (5) ပိုက်ဆံစီမံခန့်ခွဲမှု (16) MT4 (151) မီးခုံပုံစံ (36) တဖန်ပြောင်းပြန်လှန်ပုံစံ (25) စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုန်သွယ် (8) ဉီးခေါင်းရေ (6) ကုန်သွယ်မှုစနစ် (5) entry ကိုမဟာဗျူဟာ (6) entry ကိုမဟာဗျူဟာ (38) Forex နည်းဗျူဟာ (130) ထောက်ပံ့ရေးဝယ်လိုအား (9) ထောက်ခံမှုခုခံ (29) template ကို (7) လမ်းကြောင်းသစ်လိုင်း (15)
စိတ်တစ် Forex အကြောင်း
နယူး Forex ဆောင်းပါးများ
အမေရိကန်ဒေါ်လာ CAD ဆက်ဆံရေးနှင့် OIL
ကို RELATIONSHIP အထွက်နှုန်းနှင့်ငွေကြေးစနစ်
THE INDEX AND Forex အကြားဆက်ဆံရေး
2015 ©အားဖြင့် Powered theme-Vision ၏.